Imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare Soomaaliya oo maanta bilaabanaya | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare Soomaaliya oo maanta bilaabanaya
Imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare Soomaaliya oo maanta bilaabanaya
Qaybo ka mid ah Ammaanka Magaalada Muqdisho ayaa saakay si weyn loo adkeeyay, waxaana lagu waddaa in maanta ardayda dugsiyadda Sare ay u fadhiistaan Imtixaanka dowladda ee shahaadiga ah.
Wasaaradda waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in 42, 000 (Afartan & laba Kun) oo Arday ay Maanta u fariisanayaan imtixaanka, kaas oo Manta ka bilaabanaya Muqdisho & Gobolada dalka.
Xarumaha Imtixaanka lagu galaayo ayaa waxaa la geeyay Ciidamo loogu tala galay in ay suggaan Ammaanka xarumahaasi iyo kormeerayaal loogu talo galay inay ilaaliyaan Imtixaanka, kuwaas oo qaarkood ka socda Wasaaradda Waxbarashada.
La taliye ka tirsan Wasaaradda waxbarashada oo lag Magacaabo Cabdullaahi Cabdi Cumar ayaa sheegay in ardayda galeysa imtixaanka looga baahan yahay diyar garoow iyo akhris farabadan si ay u guuleystan.
Sidoo kkale Ardayda Maanta u bilaabanaya imtixaanka ayaa waxaa uu ugu baaqay inay ka diigtoonaadaan waxyaabaha dadka ay isla dhex-marayaan sida in Imtixaanka qeryb kamid ah la qeybiyay oo uu Suuqa Wareegayo.
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa lagu waddaa inay kormeeraan Goobaha ay lagu qaadaayo Imtixaanka, waxaana uu sirasmi ah uga bilaabanayaa gobolka Banaadir, Galmudug, Hirshabeelle , Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa sanad kasta qaada Imtixaanka Shahaadiga ee Dugsiyada Sare, waxaana mararka qaar ay cabasho xoogan ka timaadaa Ardayda, hayeeshee cabashadaas qaarkood la xaliyo qaarna halkaas looga gudbo.
Next articleMadaxweynaha dalka oo doonaya inuu ka tago wadan ay shacabkiisu mideysan yihiin